Finish oo doonaya inuu dhaqaale ka sameeyo waxbarashada gobolka | KEYDMEDIA ENGLISH
Finish oo doonaya inuu dhaqaale ka sameeyo waxbarashada gobolka
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa xilligan qorsheynaya inay dhaqaale ka sameeyaan ardayda iyo xarumaha waxbarashada Caasimada ku yaalla, taasoo noqotay arin kurbo ku beertay bahda waxbarashada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Tan iyo markii gobolka uu la wareegay qeyb ka mid ah maamulka waxbarashada Muqdisho, waxaa isi soo tarayey awaamiirta ardayda looga doonayo lacago dheeraad ah, oo aysan awoodin.
Qorshahan dhaqaalaha looga sameynayo waxbarashada Gobolka Banaadir ayaa waxaa wata duqa Muqdisho Cumar Finish iyo Agaasimaha Waxbarashada Gobolka Banaadir C/raxmaan Cumar, oo ah shaqsi aan lahayn aqoon maadi iyo mid diini ah, waxanna tallabaadaasi dhaleeceysay Wasaarada Waxbarashada, oo waxba kama jiraan ku tilmaantay awaamiirta dhaqaale raadinta ah, ee lagu soo rogay ardayda iyo xarumaha waxbarasho ay dhigtaan.
Dugsiyada Hoose, Dhexe iyo Sare ee ku yaalla Muqdisho ayaa lagu xukumay in ay bixiyaan $200 Dollar oo ruqsad ah, halka xarumaha jaamacadahana lagu soo rogay $1000 Dollar, waxanna caddaadiska dhaqaale ee la saaray bahda waxbarashada uu saameynayaa ardayda, waana arinta walaaca badan laga muujinayo.
Ardayda galeysa imtixaanka shahaadiga ayaa la faray in ay bixiyaan $15 Dollar oo ku qotonta Kaarka imtixaanka, iyagoo helista shahaadada dugsiga sare ku bixinaya $15 Dollar, waxanna ardayda taasi u dheer lacagta uu iskuulka ku siinayo shahaadada oo dhan $100 Dollar.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa horey u lunsaday mushaarkii macalimiintii maamuleysay imtixaanadkii ay qaaday dowladda, oo uu sanadkam wakiil ka ahaa Gobolka Banaadir, waxanna xarig loogu hanjabay maclimiintii xuquuqdooda u doontay xarunta dowladda hoose Xamar.
Madaxda daladaha waxbarasho ee caasimada, ayaa soo dhaweeyey jawaabta Wasaaradda Waxbarashada ee timid cabashadooda kadib, waxanna ay tibaaxeen in qarashaadkaasi aysan awoodin iyaga iyo ardayda Soomaaliyeed ee ay tacliinta u kordhiyaan.
Agaasimaha Waxbarashada Gobolka C/raxmaan Cumar, ayaa billaabay wixii intaasi ka danbeeyey inuu u hanjabo Wasiirka Waxbarashada Cabdulaahi Carab, maadaama uu hor istaagay qorshihii dhaqaale doonka ahaa, ee ay ka faa'iidi rabeen isaga iyo Cumar Finish, oo horey ugu hungoobay boobka dhulka danta guud.
Go'aanka Wasaarada ayaa sidoo kale sii xoojiyey, khilaafkii mudooyinkii ugu danbeeyey u dhaxeeyey Wasaaradda Waxbarashada iyo Maamulka Gobolka, iyadoo taasi ay saameyn lixaad leh ku yeelatay habsami u socodkii howlaha waxbarashada Magaalada Muqdisho, waxanna Maamulka Gobolka uu albaabada isugu dhuftay dhowr xarrumo waxbarasho.
Arintaan ayaa caqabad ku noqoneysa ardayda Soomaaliyeed, oo markii horeba nasiib u yeelan waayey in ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah, waxanna wal wal weyn ah in dhaqaale hor leh uu ku xujeynayo Gobolkii uu waajibka ka saarnaa in ay adeegaasi si bilaash ah ku bixiyaan.